HomeTurkeyBlack Sea Region61 Trabzon
Trabzon ụgbọ okporo ígwè na mgbanaka akụkọ
Ihe oru ngo Trabzon Rail na South ring Road na nzuko omeiwu
Ihe oru ngo Trabzon Rail na Mgbakọ South ring Road; BEST Party Trabzon osote Dr. Hüseyin Örs wetara nsogbu okporo ụzọ na njem njem na Trabzon na Mgbakọ nke National National Assembly. [More ...]
Ihe “4. Mgbakọ nzuzo nke International Silk Road ”malitere site na ndị sonyere 23 sitere na mba 700, ọkachasị Berat Albayrak, Minister nke Akụ na Ego na Gọvanọ İsmail Ustaoğlu. Daybọchị mbụ nke nzukọ ahụ [More ...]
4 na Trabzon. A ga-enwe nzukọ ọgbakọ azụmaahịa International Silk Road
Trabzon ga-akwado 27-29 na November 2019 ma ga-akwado 23 na nso 700 site na mba ahụ. Ekwuputara ndi Oha ahia International Silkroad 'na nzuko nke akuko banyere ihe ohuru a. Gọvanọ nke Trabzon [More ...]
Enwere ike imeghe ụwa Railway Erzincan Trabzon
prọfesọ Dr. Atakan Aksoy kwuru, “E nwere ụzọ dị iche iche maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè Erzincan Trabzon. Enwekwara ụzọ dị iche iche iji banye ụgbọ oloko. Transportgbọ njem n'oké osimiri chọrọ ume. Ndị ọrụ ngo abụọ na mpaghara ahụ [More ...]
Ole ka mmadụ ole ga-ekerịta na Trabzon ?; Nzukọ mbụ nke Trabzon Metropolitan Municipality na Nọvemba nwere nnọkọ n'okpuru onye isi nke Mayor nke Trabzon Metropolitan Mun Murat Zorluoğlu. N’ime obodo, sistemụ ime obodo nke dị n’ime batara ọzọ. [More ...]
Ohere dị iche iche na ihe iyi egwu dị na Otu Ọgbọ Otu Ọrụ Otu; New Turkey, na-ejikọ China na Europe "Otu ọgbọ ga-ike ọnọdụ nke a ụzọ oru ngo" isonyere uwa ụwa iji. Osote Rector nke Mahadum Eurasia [More ...]
Nyocha nlegharị anya na Nzukọ atụmatụ 2020 mere na Trabzon. İsmail Ustaoğlu, onye isi obodo Trabzon, Murat Zorluoğlu, onye isi obodo nke TTSO, Suat Hacısalihoğlu, Onye Omenala na Omenala Dalịnịsta Ali Ayvazoğlu, Eastern [More ...]